ABB moto amidy, abb motor list list, abb motor distributor, motor abb
Mpizara motera ABB
Iray amin'ireo mpaninjara motera sy mpanondrana ABB tsara indrindra avy any Chine
Mahazoa katalaogera motera abb avy, mivarotra motera elektrika ambany ABb izahay, motera miovaova avo lenta ABB, servomotors abb ary motera syncopoint abb. Na mifandraisa aminay mba hahitanao ny lisitry ny vidin'ny motera abb, amin'ny maha mpivarotra motera abb motera anao sy mpaninjara motera abb, azonay atao ny misafidy motera abb ho anao miaraka amin'ny ravin-data motera abb. Abb drive amidy, raha te hahita mpamatsy abb ianao, abb môtô, mifandraisa anay fotsiny.
Motor M2BAX ABB
Môtô ABB M2BAX andian-dahatsoratra tsy mifangaro telo, môtô mitsivalana sy mitsangana 2 4 6 8 môtô, motera fampisehoana Volambola ambany ankapobeny, mety indrindra amin'ny fampiharana famolavolana tsotra. Miaraka amin'ny kalitaon'ny kilasy voalohany sy fanohanana matanjaka an'ny ABB, ny fiasan'ireo motera ireo dia eken'ny mpanjifa sy OEM maro be. Ny motera dia mahomby amin'ny fahombiazan'ny IE2. Haben'ny habe avy amin'ny 71-355, 0.18-355KW. M2BAX andian-dahatsoratra Motors dia nafarana bearings NSK, SKF marika bearings, ny motera rehetra dia miaraka amina axial hidin-trano bearings amin'ny faran'ny D. Ny kilasy fiarovana ny famolavolana ny vokatra IP55, raha manome IP56, IP65 namboarina. Manome amina am-polony configurations safira fiovan'ny môtô mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny tontolo iainana isan-karazany.
ABB motera M3BP
andian-tsarimihetsika ABB m3bp maotera, motera mandaitra avo lenta, motera môtô mpamonjy herinaratra, motera tia tontolo iainana. Fahombiazana: fenitra fahombiazan'ny kilasy eropeana I, · Herin'aratra: 0.25-710KW (mihoatra ny 710KW azo ampidirina amina motera M3BP), · TOSIKARATRA: 220-690V, · Azo ampiasana kojakoja isan-karazany toy ny encoder, misy, · Drive tsy tapaka mahazatra na miovaova matetika, · Herinaratra mitondra fiara inverter> 100KW, mila ampitaina amin'ny bearings, M3BP71 ； M3BP80, M3BP90, M3BP100, M3BP112, M3BP132 ； M3BP160 ； M3BP180 ； M3B200 M3B225 , M3BP250; M3BP280
MQAEJ, QAEJ andiany telo miendrika electronagnetika andiany fahatelo mizaka ireo andiany amin'ny karazan-dahatsoratra myUEJ sy YUEJ taloha. Ny firafiny dia fitambaran'entana QA andiany sy brakes elektromagnetika. Izy io dia fitaovana fanamoriana tsara indrindra ho an'ny fanavaozana indostrialy. Izy io dia manana tombony amin'ny elanelam-pahefana lehibe, ny rafitra tsotra, ny feo malefaka, ny fotoana fohy, ny fofona azo itokisana ary ny refy fametrahana mitovy (afa-tsy ny halavan'ny total). Nampiasa betsaka tamin'ny milina fanamboarana kitay, fiara fitoniana herinaratra ary fitaovana milina fanoratana metaly isan-karazany, jiro famokarana indostrialy maivana, milina famokarana, milina simika, orinasa fananganana, sns.
Ny andiam-pipoahan'ny motera AB2 M4JA ho an'ny Marine dia noforonina tamin'ny voltatra malalaka, ary ny fahombiazany, ny herin'ny herinaratra ary ny hafainganam-pandehan'ny motera dia somary miovaova arakaraka ny toe-bolan-tseranana isan-karazany. 4-50V / 220-240V, △ / 丫. Ho an'ny fifandraisana. · B380 frame size with foot, end cap without flange, B420 frame size without foot, end cover with flange, B380 frame size base with foot and end cover with flange. Usd ho an'ny indostria solika, entona voajanahary ary simika, dia misy entona na etona mirehitra isan-karazany azo amokarina amin'ny fizotry ny famokarana. Ohatra, ny refineries dia misy propane, butane, solika, etilena ary acetylene; ary ny zavamaniry zezika dia manana amoniôna, methanol, carbon monoxide ary entona rano.
M2QA andian-dahatsoratra elektrika ABB dia miaraka amin'ny (3KW sy ambany motera herinaratra 220-240V / 380-420V, 4KW sy ambony, Power maotera 380-420V / 660-690V, △ / Y) famolavolana malefaka, ny motera dia miasa amin'ny voltages isan-karazany, Ny fahombiazana, ny herin'ny herinaratra ary ny hafainganam-pandeha dia miova kely ao anatin'ireto fepetra ireto.
Ny môtô QABP miovaova matetika dia mibaiko tsy misy ifandimbiasan-davitra dia môtô iray izay manatanteraka ny fanovana matetika sy ny hafainganana amin'ny alàlan'ny mpanova matetika. Ny motera dia mandray rafitra tranom-borona ary miaraka amina mpankafy mikoriana manokana mba hahazoana antoka fa misy vokany tsara amin'ny motera amin'ny hafainganam-pandeha hafa ny motera. Ny môtô dia namboarina manokana ary novokarina ho an'ny fifehezana hafainganam-pandeha tsy misy tohatra, ary azo ampiasaina amin'ny indostria toy ny indostria maivana, ny lamba, ny simika, ny metallurgy, ny fitaovana milina ary ny zavamaniry hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha. Ny refin'ny fitsangantsanganana tongotra sy ny haavon'ny haavon'ny afovoany dia mifanaraka amin'ny maotera andiany M2QA. Ny herin'ity andiana motera ity dia avy amin'ny 0.25KW-315KW, ary ny haavon'ny afovoany dia avy amin'ny 71mm-355mm.
QAMT andian-dàlana fametrahana in-telo ho an'ny milina fitaratra. Ny môtô serasera QAMT dia namboarina manokana ho an'ny fitaovana fanodinana lalina fitaratra. Manana rivotra madio tsara izy io, ary ny akora ampiasaina amin'ny vy vy mahery, ny fitaomana SKF. Izany dia miantoka ny môtô afaka mihazakazaka tanteraka ao anatin'ny fepetra sarotra. Ny motera serasera QAMT dia mety amin'ny milina fanodinana lalina fitaratra samihafa.
Marika: maodely ABB: andiany M3AA Aluminium trano, 0.55KW-30KW; Tany am-piandohana: karazana firafitry ny fametrahana an'i Shina: Fomba famatsiana herinaratra hafa: karazana famatsiana herinaratra AC: Fitsipika miasa ho an'ny maotera AC: Fitsanganana maotera tsy misy ifandraisany sy fotokevitra fiasana: Haingam-pandeha mihazakazaka mandeha amin'ny motera: dingana hafainganam-pandeha maotera tsy tapaka: Fomba fiasa maotera dingana telo: Fampiasa hafa: Karazan'asa ankapobeny: karazana fiarovana ny maotera: sokajy misimisy fisokafana: Kilasy F. Ny fiarovana ny endrika mahazatra an'ny motera dia ny IP55, izay manome fiarovana avo lenta kokoa arakaraka ny zavatra takian'ny mpanjifa. mampitombo ny fahamendrehana amin'ny maotera. fahombiazana avo lenta, ny motera M3AA dia nohamarinina hahomby avo lenta ary miteraka fitehirizana angovo betsaka.
M2JAX andiany fipoahana-porofo telo-motera tariby telo mampitambatra dia novolavolain'ny ABB Motors Corporation tamin'ny alàlan'ny teknolojia fanamboarana motera fipoahana vaovao ary mampifangaro ny toetran'ny GB 3836-2000 fenon'i Shina. Ampiasaina any amin'ny orinasa an-trano izy ireo ho an'ny vokatra motera mipoaka (Ex d C) Class Class (Ex d C) ankehitriny (vondrona vondrona T4-T1). Fakan'ny famatsiam-pitiavana tanteraka
Mandehana any amin'ny fivarotana an-tserasera ABB
Mba hahazoana tolotra vidiny ho an'ny karazana motera ABB rehetra
Momba ny ABB Motors sy ny mekanika inc
Ny motera ABB sy ny mekanika inc dia manome motera herinaratra isan-karazany mifanaraka amin'ny fenitry ny IEC mba hamenoana ny filàn'ny indostria samihafa, anisan'izany ny motera manara-penitra, motera miovaova, motera marin-drivotra, motera fipoahana, motera tsy manidina, motera flue, roa- motera hafainganam-pandeha, motera tapaka, ary ny rotatera ivelany. Mpitondra môtô, fikosehana lohany. Ny motera manokana dia azo namboarina arakaraka ny takin'ny mpanjifa, izany rehetra izany dia mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifanay. Mandritra izany fotoana izany, ny orinasany dia manolotra motera midadasika amin'ny alàlan'ny famaritana insulation samy hafa sy fitakiana volavolan-tseho sy frekuora samihafa. Ireo mpanjifa OEM lehibe ao amin'ny orinasa dia mpankafy ny famatinan'ny rivotra, milina seranan-tsambo sy vovo, pumps, reducers, fitaovana milina, milina vita amin'ny lamba, milina fitaratra, an-dranomasina, milina mpanampy herinaratra, milina circuit circuit ary mpitarika indostria hafa. Fototry ny tetikasa: orinasa mpamokatra herinaratra, pulp ary taratasy, petrokimia, metallurgie, sambo, seranan-tsambo, fananganana, simenitra, seranam-piaramanidina, sns .. Amin'izao fotoana izao, ny 45% amin'ireo moto vokarin'ny orinasa dia haondrana any ivelany amin'ny alàlan'ny tambajotram-barotra iraisan'ny ABB, indrindra any amin'ny Tsena eoropeana.
Momba ny katalaikan'ny motika abb sy ny takelaka data momba ny motera
Manana ny katalaogera motera abb rehetra eny an-tananay izahay ary mifandray aminay amin'ny takelaka angona motera abb na sary môtô abb tadiavinao dia halefanay ho anao raha vantany vao azonay izany.
Momba ny mpaninjara motera abb sy mpivarotra motera abb
Izahay dia iray amin'ireo mpivarotra nahazo alàlana avy amin'ny ABB ary afaka manome anao ny taratasy fanamarinana rehetra izahay hanohanana anay amin'ny fizarana abb. ary azo antoka, ny motera ABB rehetra avy aminay dia tena izy ary azo antoka ny kalitao.
Momba ny fisafidianana môtô ABB sy ny antsipirihany nameplate
Misy lafin-javatra betsaka hamaritana ny tena motera ABB izay ho tsara indrindra amin'ny fampiharana yur. Hanao an'ity fifantenana ity izahay. Ny importatnt be indrindra dia ny tsy maintsy hanomezanao anay araka izay tratra ny antsipiriany, ohatra, ny fampiasana ny kapila miaraka amina fampiharana torio tsy tapaka? Ahoana ny fahombiazan'ny fanaraha-maso amin'ny hafainganam-pandeha ambany? sns. Saika ny antsipirian'ny fampahalalana rehetra ao amin'ny abb motor nameplate.
No.5 Wanshoushan Road Yantai, Shandong, Sina
Izahay dia mamorona posibilabilitation Creative
Ny motera ABB dia manome ny mpanjifa vokatra ABB mahomby sy azo antoka miaraka amin'ny fitantanana sy ny haitao mandroso. Ny fahombiazan'ny angovo ABB dia manakaiky ny 100%, mitahiry hatramin'ny $ 500,000 bebe kokoa. Ny motera ABB dia mahatonga ny motera misy antsika ankehitriny haingam-pandeha haingam-pandeha avo lenta kokoa, ary koa ny motera haingam-pandeha manerantany dia mitambatra amin'ny kalitao avo lenta sy amin'ny vidiny.
ABB Motors sy mpanamboatra ampiasaina amin'ny indostrian'ny sambo Ship
Ny vokatra, vahaolana ary serivisy an'ny ABB ho an'ny indostrian'ny Shipbuilding of Marine izay afaka miantoka ny fahombiazana sy ny fahamendrehana tsara na dia amin'ny fangatahana fangatahana aza. Ny fampiroboroboana ny sambon'ny vokatra indostrialy an-dranomasina dia afaka mamaly ny fepetra farany azo antoka sy fiarovana amin'ny tontolo iainana, ary ny tambajotranay manerantany dia miantoka fa afaka mamaly haingana ianao sy isaky ny mila izany.
ABB dia manolotra motera feno, mpamokatra ary fandefasana fangatahana an-dranomasina, ao anatin'izany ny motera sy ny motera miaraka ary mpamokatra, ary koa ny haingam-pandeha ambany. Ny traikefa azon'ny indostrian-dry zareo dia ahafahantsika mahafantatra ny filan'ny mpanjifanay ary mahatonga antsika marika mahatoky.
ABB Motors sy mpanamboatra ampiasaina amin'ny indostrian'ny fitrandrahana
Ny indostrian'ny mpitrandraka sy harena ankibon'ny tany dia misy fitaovana elektrika sy mekanika amin'ny toeram-pitrandrahana sy zava-maniry amin'ny fanodinana ny orana ho an'ny fitrandrahana sy fanodinana ny orana.
Ny indostrian'ny harena ankibon'ny tany dia mandalo fampivondronana izay nahatonga ny orinasam-pitrandrahana kely kokoa sy lehibe kokoa hanjaka amin'ny tsena. Ireo orinasa mpanjifa lehibe ireo dia manana orinasa amin'ny bisikileta ABB satria ny fanampiana ny ABB amin'ny vokatra sy ny serivisy dia tsy voafetra amin'ny toeram-pitrandrahana. ABB dia manome ny vokatra OEM sy ny EPC amin'ny vokatra sy serivisy ihany koa.
Hitohy ny fitakiana ny vokatra fototra, fa hihena sy ambany kosa ny kalitaon'ireo takelaka vy sisa, izay ahafahan'ny orinasa mpitrandraka hihena sy hampitombo ny vokatra mba hijanona ho mifaninana amin'ny tsena. Ireo orinasa mpitrandraka ireo dia mitady ny teknolojia tarika avy amin'ny ABB hanampy azy ireo hahatratra ny tanjon'izy ireo hanatsara ny fahatokisana, hampihena ny fanjifana angovo, ary hampitombo ny automation sy ny mekanisma. Ny vokatra sy serivisy motera ABB matetika dia mihoatra ny fanantenan'ny mpanjifa ary mpiara-miasa ho an'ny orinasa mpitrandraka manerantany.
ABB Motors sy mpamokatra ho an'ny indostrian'ny solika, angovo voajanahary sy ny indostria simika
Amin'ny alàlan'ny fiovan'ny karbika ara-batana sy simika dia mahafeno ny indostrian'ny menaka, entona ary simika ny fitomboan'ny fangatahana eran-tany, ny sakafo, ny trano ary ny fitsaboana. ABB dia manohy mampitombo ny fampiasam-bola amin'ny teknolojia hanampiana ny indostrian'ny solika, ny entona ary ny simika simba ny angovo, miasa tsara sy hampihena ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana.
Ny motera ABB dia manolotra motera feno azo itokisana sy mahomby ary mpanova matetika ho an'ny indostria menaka, entona ary simika iray manontolo. Ny vokatra ABB dia natao ho an'ny sehatry ny indostria ary ny teknôlônan'ny fananany dia miantoka ny fotoana ambony kokoa ary tsy dia fikojakojana loatra. Ny traikefa azon'ny indostria be dia be ahafahanao mahafantatra ny zavatra ilainao ary mpiara-miasa atokisanao.
ABB Motors sy mpamokatra ho an'ny indostrian'ny sakafo sy ny zava-pisotro
ABB Motors ampiasaina amin'ny indostrian'ny sakafo sy ny zava-pisotro usuall dia mila mifanaraka amin'ny fepetra takiana, toa ny fikosoham-bary, ny mifangaro ary ny mpampita hafatra ampiasaina amin'ny fanodinana henan'omby, akoho, trondro, kafe ary vokatra vita amin'ny mofo. Mandritra izany fotoana izany, ny fitaovana ampiasaina amin'ny fanodinana sakafo sy zava-pisotro dia mitaky lozabe, tsy dia lava loatra ary maharitra ny fahombiazan'ny angovo mandritra ny androm-piainany.
Ny bisikileta ABB dia manolotra vahaolana marika famonoana maotera sy fahombiazana ho an'ny indostrian'ny sakafo sy ny zava-pisotro, avy amin'ny fanodinana ny akora, ny fanodinana ary ny fanomezana ny fonosana sakafo sy ny fitahirizana any amin'ny faritra toy ny fanodinana hena sy ny vokatra vita amin'ny ronono. Mameno ny fepetra takian'ny indostria henjana.
Na amin'ny fampiharana fangatahana indrindra aza, ny vokatra sy serivisy ABB dia manampy amin'ny fahatratrarana ny fahombiazan'ny angovo sy ny vokatra azony isaky ny dingana. Miaraka amin'ireo fitaovana manta sy haitao mandroso indrindra, ny motera ho an'ny indostrian'ny sakafo sy ny zava-pisotro dia afaka miatrika ny fanambin'ny fangatahana fizotran-javatra rehetra ary miasa tsara sy mitohy.